राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु मुलबासी मंगोलको राज्य संग असन्तुष्टिको प्रतिक्रिया- डा.सुरेन्द्र केसी - MONGOL KHABAR
राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु मुलबासी मंगोलको राज्य संग असन्तुष्टिको प्रतिक्रिया- डा.सुरेन्द्र केसी
काठमाडौ । राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र केसीले राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु भन्दा पनि राष्ट्रिय झण्डा किन जलाइयो ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि चलेको बहसमा डा.केसीले सो कुरा बताएका हुन् ।
एक युट्युब च्यानलसँग डा.केसीले भने, ‘राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु भनेको असन्तुष्टिको प्रतिक्रियात्मक स्वरुप हो । राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु भन्दा पनि राष्ट्रिय झण्डा किन जलाइयो ? भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले पनि बुझ्न जरुरी छ ।
मुलबासी मंगोल (नेवार, थारु, धिमाल, मेचे, कोचे, कुमाल, शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, दनुवार) इत्यादिका असन्तुष्टिलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्दा राज्यलाई चुनौतीको साथ प्रतिक्रियाको रुपमा राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको डा.केसीको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु भनेको असन्तुष्टिको प्रतिक्रियात्मक स्वरुप हो । राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु भन्दा पनि राष्ट्रिय झण्डा किन जलाइयो ? भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतदेखि नै हामीले राष्ट्रको धरोहरमाथि प्रहार गर्दै आयौ । पञ्चायतले यस्तो किसिमको गतिविधि साम्प्रदायिक हुन्छ भन्दै लामो समयसम्म नियन्त्रित राष्ट्रवादको नारामा हामीलाई हिडायो । तर भित्रभित्र मुलबासी मंगोल वा अन्य रुपमा असन्तुष्टिहरु थिए । त्यसपछि २०४७ सालको संविधान आयो ।
४७ सालको संविधानपछि एउटा नयाँ खालको जीवनी, प्रगतिशील प्रजातान्त्रिक सोच आचरण आएर असन्तुष्ट समूहरुलाई पनि त्यसमा समाहित गरेर लैजानुपर्नेमा नेताहरुले त्यसलाई सत्ताको खेला बनाए । सत्ताको लागि जे पनि गर्ने नेपालका नेताहरु, नातावाद कृपावाद बेविचार पनि हाबी भयो ।
त्यसको जगमा माओवादी आयो । माओवादीले यी सबै कुरालाई सैद्धान्तिकरण गर्यो । जातीय राज्यको अवधारणा आयो, आत्मनिर्णयको कुरा आयो । त्यसपछि विषय अगाडि बद्दै–बढ्दै २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलन भएपछि माओवादीले त्यो जगमा उभिएर आफूले उठाएका नाराहरु, कार्यभार र कार्यदिशालाई पनि एउटा वाञ्चित परिणाममा लैजानुपर्नेमा ऊ झन् भ्रष्टिकरण र अवसरवादी चरित्रमा आइदियो । छोरी, बुहारी, स्वास्नी बोकेर हिड्न थाले । त्यसपछि जुन यो झण्डा जलाउने तत्व छ, त्यो तत्वका असन्तुष्टि र आवाजहरु सम्बोधित भएनन् जहीको तही रहे । अब पनि राज्यले यो बिषयलाई बेवास्ता गरे नेपालका मुलबासी मंगोलहरुले देशमा बैचारिक, कुटनैतिक र सैद्धान्तिक रुपमा आन्दोलनको आधिबेहरी ल्याउने पक्का छ ।